I-GoDaddy: Ukushiya i-Boobs Behind and Kicking Ass | Martech Zone
NgoMsombuluko, Juni 16, 2014 NgoLwesithathu, Septemba 29, 2021 Douglas Karr
Ngangizonda GoDaddy. Ngenze njalo. Angikholwanga ukuthi umkhiqizo ungachitha izigidi zamaRandi ukukhanya okukhanyayo futhi ngiqhubeke nokwakha ibhizinisi elingaka. Kwakuyimpama ebusweni kubakhangisi abasebenze kanzima ukugcina imikhiqizo yabo ifanele, isobala, ichwepheshe futhi iyasiza ezilalelini zabo. Kwakuyindlela elula yokuphuma… futhi kwabonakala kusebenza. Ngeluleke wonke amaklayenti ami ukuthi asebenzise ezinye izinsiza futhi angahlali kude.
Ngokuhamba kwesikhathi, noma kunjalo, amaklayenti ethu aya ngokwanda ngamashumi usebenzisa iGoDaddy. Futhi bebengasebenzisi le nsizakalo kuphela, kepha futhi bebengitshela yeka ukuthi inkulu kangakanani insizakalo yamakhasimende evela enkampanini empeleni yayikhona. Ngakho-ke kolunye uhlangothi kwakuyinkampani eyayinakekela amakhasimende ayo nezinsizakalo eyayihlinzeka ngazo ... kanti ngakolunye uhlangothi kwakungumkhankaso womkhiqizo nowokukhangisa owawunentsha futhi ungenalutho.
Kodwa igagasi liyashintsha. Umngani UChristopher Carfi (ojoyine iqembu likaGoDaddy) wangixhumanisa noMqondisi wabo Ophakeme Wezokuxhumana Komphakathi, uSusie Penner futhi ngemuva kwalokho ngaba nengxoxo engakholeki noMphathi Wezokuxhumana Omkhulu, UKaren Tillman. Kulungile… a Susie futhi Karen ehola ukuxhumana okusha! UKaren akuyena yedwa owesifazane ebuholini obuphezulu. UBlake Irving, umphathi omusha kaGoDaddy oqokwe ngasekupheleni kuka-2012 ubelokhu enza izinguquko eziningi enkampanini eqhubekisela phambili umkhiqizo… futhi manje IGoDaddy ilungiselela i-IPO yabo.
Ukukhangisa kukaGoDaddy nakho kuyashintsha! Bakhiphe lesi sikhangiso seSuperBowl esihlinzeka ngomkhiqizo ohluke ngokuphelele nomyalezo emphakathini, iGoDaddy isiza abantu ukushintsha amaphupho abo abe ngamabhizinisi.
Ngamasevisi amangalisayo - avela kuzizinda, ukusingathwa, ukusingathwa kwe-WordPress Hosting, izitifiketi ze-SSL, ukusingathwa kwe-Microsoft Office 365, ukugcinwa kwamabhuku ku-inthanethi, umakhi weWebhusayithi, izinhlelo ze-Ecommerce kanye ne-Local Search… GoDaddy impela inamathuluzi angabizi kakhulu atholakalela amabhizinisi amancane. Kufaniswe nomsebenzi wabo omuhle futhi nginesiqiniseko sokuthi bahamba ngendlela efanele.
Kuyilapho isihle ingemuva kwabo, lokho akusho ukuthi iGoDaddy ihambe kancane! Hlola IManifesto kaGoDaddy yeKick Ass:
Halala, GoDaddy! Ngicabanga ukuthi usukhahlela imbongolo.
Tags: UBlake Irvingceo godaddyuChristopher Carfigodaddyumnikelo wokuqala womphakathiIpoUKaren Tillmansusie pennerIManifesto kaGoDaddy yeKick Ass
#Atomicchat: Okuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi
I-Accelerator ye-Accent: Qondanisa izinto zokuthengisa nezokumaketha